अन्तर्राष्ट्रिय Archives - Like For Nepal
खोप नलगाएकालाई समेत खोप कार्ड बेचेर १८ करोड रुपैयाँ कमाउने दुई नर्स प*क्राउ
अपराध अनौठा छन् । अपराधका लागि मानिसहरुपनि जे जति खर्च गर्नपनि तयार छन् । अझ धनको लोभमा मानिसहरु जे गर्नपनि तयार छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकालाई खोप कार्ड बेचेर १५ लाख डलर अर्थात १८ करोड नेपाली रुपैयाँ कमाउने न्युयोर्कको लङ आइल्याण्डका दुई नर्स पक्राउ परेको खबर अहिले भाइरल छ । अमेरिका जस्तो देशमा त पैसाका लागि यतिहदसम्म भइरहेको छ भने गरिब देशहरुमा के भइरहेको होला ? अनुमान मात्र गर्न सक्छौ । न्युयोर्कको राज्यको डाटावेसमा खोपा नलगाएकाहरुको विवरण पनि खोप लगाएको भन्दै राखेर कार्ड बेच्ने २ जना नर्सहरुलाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेपछि यो सनसनीपूर्ण तथ्य बाहिर आयो । ४९ वर्षकी जुली डेबुनो र ४४ बर्षकी मारिसा उराओलाई पक्राउ गरिएको अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन् । उनीहरु वाइल्ड चाइल्ड पेडियाट्रिक हेल्थ केयरमा कार्यरत रहदै आएका थिए भने डेबुनो त्यसकी संचालक समेत हुन्। उनीहरुले सन् २०२१ क...
रुसले युरोपलाई ग्यास दिएन भने अमेरिकाले जुटाउन सक्ला ?
युक्रेन संकट चर्किरहेको बेलामा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युरोपेली मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराउने ग्यासमा कटौती गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ । त्यस्तो अवस्था आएमा अन्य मुलुकहरूबाट ग्यास लिनका लागि व्यवस्था मिलाउने आश्वासन अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले दिएका छन् । तर विज्ञहरूका अनुसार, अन्य मुलुकले रुसको जस्तो परिणाममा ग्यास उपलब्ध गराउन सक्दैनन् । ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युसनमा ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु पहलकी निर्देशक समान्था ग्रोसले बाइडनको पहल विफल हुने बताइन् । ‘रुसले ग्यासको आपूर्ति बन्द गरेमा हामीले पूर्ति गर्न सक्दैनौं । अन्य आपूर्तिकर्ताले त्यति धेरै ग्यास दिन सक्दैनन् । यो भौतिक रूपमा सम्भव छैन,’ उनले बताइन् । संसारको तेस्रो सबभन्दा धेरै ग्यास भएको कतारले ग्यास उपलब्ध गराउने आशा अमेरिकाले लिएको छ । तर कतारले अहिले नै पूर्ण क्षमतामा ग्यास उत्पादन गरिरहेको छ । उसका अधिक...
यसैहप्ता अमेरिकाको एफ–३५ विमान दक्षिण चीन सागर ‘साउथ चाइना सी’मा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा सात अमेरिकी सेना घाइते भएका छन्। सीएनएनकाअनुसार एफ–३५ सी लाइटिनिङ दोस्रो जेट विमान चीनले दाबी गर्ने दक्षिण चीन सागरमा युद्ध अभ्यास गरिरहेको थियो। सो क्रममा आणविक हतियार सम्पन्न यूएसएस कार्ल भिनसन युद्धपोतमा अवतरण गर्ने क्रममा सो विमान दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। उक्त विमानका पार्टपुुर्जाहरु समुद्रमै खसेको बताइएको छ। विमानका पाइलटले विमान दुर्घटना हुनासाथ इजेक्सन सिट खोलेका थिए जसका कारण उनको ज्यान जोगियो। हवाईस्थित अमेरिकी नौसेनाका कार्यालयका अनुसार घाइते भएका सातै नौसेनालाई फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा उपचारको लागि पुर्याएको छ। चीनले दक्षिण चीन सागर आफ्नो भएको दाबी गर्दछ। यहाँको ९० प्रतिशत पानीमा आफ्नो अधिकार भएको उसको भनाइ छ। यस सागरबाट वर्षेनी खरबौं डलरको कारोबार हुने गर्दछ जसकारण यसलाई ज्या...
अमेरिका र जापानको शक्ति प्रदर्शन लगत्तै ताइवानको हवाई क्षेत्रमा चिनियाँ लडाकु जहाज
चीनले ताइवानको हवाई सुरक्षा पहिचान क्षेत्र (एडीआईजी) मा ३९ वटा लडाकु विमान पठाएको ताइवानका रक्षामन्त्रीले दाबी गरेका छन् । अमेरिका र जापानले फिलिपिने सुमन्द्रमा जलसेनाको संयुक्त अभ्यास गरेको भोलिपल्ट नै चीनले लडाकु विमान पठाएको हो । फिलिपने समुन्द्र ताइवानको पूर्वमा रहेको प्रशान्त महासागरको हिस्सा हो । यो अमेरिका नियन्त्रित गुआम र उत्तरी मरियाना टापूको बीचमा रहेको छ । अमेरिका र जापानको शक्ति प्रदर्शनमा दुई अमेरिकी एयरक्राफ्ट क्यारियर, दुई एसल्ट जाहज, जापानको हेलिकप्टर डिस्ट्रोयर, पाँच डिस्ट्रोयर लगायत सहभागी थिए । यता, चीनको लडाकु विमानहरुमा २४ वटा जे–१६ फाइटर जेट, १० वटा जे–१० फाइटर जेट, वाई–९ विमान, दुई वाई–८ विमान र एउटा एच–६ बम्बर रहेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्षको अक्टोबरमा पनि चिनियाँ जहाजहरू आफ्नो हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसम...
रुसले युक्रेनमाथि ह*मला गर्न सक्ने भन्दै ८ हजार बढी अमेरिकी सेना ‘हाई अर्लट’मा
रुसले युक्रेनमा आक्रमणको तयारी गरेको भन्दै अमेरिकाले ८ हजार ५ सय सैनिकलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ। रुसले आक्रमण गरी युक्रेन कब्जा गर्ने तयारी गरेको दावी गर्दै त्यस्को प्रतिकार गर्न अमेरिकाले आफ्ना ८ हजार ५ सय अमेरिकी सेनालाई तयारी अवस्थामा राखेको बीबीसीमा समाचार छ। रुसले युक्रेन नजिक झण्डै एक लाखको संख्यामा आफ्ना सैनिकहरु तैनाथी अवस्थामा राखेको छ। रुस र युक्रेनबीच जुनसुकै बेला युद्ध हुन सक्ने खतरा बढेको छ। रुसी सैनिकले युक्रेनमाथि आक्रमण थाले त्यसको प्रतिकार गर्न अमेरिकी सेना खटिने छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेनमाथि गर्ने सम्भावित हमला र पछिल्लो अवस्थाका बारेमा युरोपेली मुलुकका अधिकारीहरुसँग सोमबार बिहान छलफल गरेका छन्। भिडियो कन्फरेन्सबाट भएको उक्त छलफलमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले रुस विरुद्ध साझा रणनीति बनाउने विषयमा सहमत भएका छन्। annapurnapost बाट साभार...
मृ त्युद ण्ड कुरिरहेकी आमालाई साउदीको जेलमा भेट्दा
तपाईंको आमासँग मिल्ने नाम भएकी एक महिला साउदीको जेलमा हुनुहुन्छ । तपाईंको आमा हो कि अरू नै, एक पटक आएर भेट्नुपर्‍यो ∕’ नवलपरासीका सुनील गुरुङलाई साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव भरत खनालले २०७५ फागुनको एक दिन फोनमा भने । सुनील साउदी अरबको प्रमुख औद्योगिक सहर दमाममा काम गरिरहेका थिए । उनी डेढ वर्षअघि मात्रै त्यहाँ पुगेका थिए । ‘मेरी आमाको शव म आफैंले अन्तिम संस्कार गरिसकेको छु । काजकिरिया पनि भइसकेको छ,’ आश्चर्य मान्दै उनले खनालसमक्ष भने, ‘नाम मिल्दैमा मेरो आमा हुन सक्ला र ? तैपनि म भेट्न आउँछु ।’ सुनीलले २०६९ वैशाखमा पशुपति आर्यघाटमा आमा सरस्वतीलाई दागबत्ती दिएका थिए । घरेलु कामदारका रूपमा साउदी अरब पुगेको ७ महिनामै सरस्वतीको शव आएको थियो । सुनील र सुनीलकी दिदी सुशीलालाई आमा साउदी पुगेको थाहा थिएन । बुबाको मृत्यु भएपछि सम्पर्कविहीन भएकी उनी साउदी पुगेको मृत्युको खबरपछि म...
मान्छे मा’रेर २८ बर्षदेखि फरार व्यक्ति घरभित्र डोकोमा लुकेको अवस्थामा प क्राउ
ज्यान मा’र्ने उद्योगमा जिल्ला अदालत रामेछापबाट २० बर्ष कै’द स’जाय सुनाइएका रामेछाप दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–४ गौश्वराका ५५ बर्षिय होम बहादुर थापामगरलाई प्रहरीले २८ बर्षपछि पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले थापामगरलाई उनकै घरभित्र डोकोमा लु’कीरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका डिएसपी नवराज ढुंगानाले अदालतबाट कै’द स’जाय सुनाएपछि फरार रहेका थापामगरलाई विशेष सूचनाको आधारमा घरमा आएको मौ’का छा’पेर पक्राउ गरिएको बताए । उनले भने,‘प्रहरी घरमा पुग्दा थापामगरकी श्रीमतीले घरमा छैन भनेर ढाँ’टेकी थिइन, तर प्रहरीले खो’जतलास गर्दा डोकोमा लु’केर बसेको अवस्थामा फेला पार्यो ।’क’र्तब्य ज्यान मु’द्दामा रामेछाप जिल्ला अदालतबाट २०५० फागुन १६ गते फै’सला भई थापामगरलाई २० बर्ष कै’द स’जाय तोकिएको थियो । त्यसपछि २८ बर्षदेखि फरार रहेका उनलार्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापबाट खटिएको प्र...
नेपाली पञ्जे बाजामा अहिले सम्म कै उत्कृष्ट डान्स – भिडिओ हेर्नुस्
पञ्चै बाजा (पञ्च’बाजा, पञ्चेबाजा) अथवा पाँच बाजा हरू को समुह हो। यो बाजा नेपाल को पहा’डी भेक तथा भा’रत को सिक्किम तथा दार्जी’लिङ मा बजा’ईने ग’रिन्छ। पञ्चै ’बाजा मा दमाहा, झ्याली, ट्याम्को, ढोल’की र सहना’ई पर्द छन्।पन्चे बाजा, नेपाली धार्मिक एबम् साँस्कृ’तिक बाजा को रूप मा प्रयोग हुदै आए को मौलिक संस्कृति को धरो’हर हो । यो बाजा वि’भिन्न धार्मिक तथा सामा’जिक उत्सव को बेला मा बजाउने गरिन्छ जस्तै विवाह, व्रतवन्ध, चाड’बाड, जात्रा, रो’पाईं, पूजा-आजा आदि । नेपाली संस्कृ’तिमा कुनै ठूलो कार्य गर्दा साईत को मह’त्त्व हुन्छ। त्यस्ता साईत हरूमा मङ्गल धुन ब’जाएर उक्त साईत लाई शुभ बनाउ’ने चलन छ। मङ्गल धुन ब’जाउन को लागि पञ्चे बाजा सबै भन्दा प्रच’लित बाजा हो ।परम्प’रागत रूपमा नेपाल का दमाई समुदाय ले मात्र यो बाजा बजाउ ने गर्द’थे।हाल यो बाजा विभिन्न समुदाय का पुरुष र पछिल्ला दिन हरुमा महिलाहरु ...
मलेसियाले ३० हजार सुरक्षा गार्ड जनवरीमा भर्ना गर्ने, यी देशले पाए अनुमति.. !
बंगलादेशको सेना कल्याण संस्था र मलेशियन सेक्युरिटी इन्डस्ट्री एसोसिएसन (PIKM) ले बिहीबार क्वालालम्पुरस्थित बंगलादेश उच्चायोगमा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको मलेसियाको अनलाइन न्यूज पोर्टल मलेशियाकिनीको रिपोर्टले जनाएको छ। यसले शुक्रबार रिपोर्ट गरेको छ कि PIKM ले आप्रवासी सुरक्षा गार्डहरू सोर्सिङको लागि बंगलादेशलाई दोस्रो देशको रूपमा चयन गरेको छ, नेपाली गार्डहरूले छोडेका करिब ३०,००० रिक्त पदहरू पछि, जुन हाल यहाँ मात्र काम गर्न अनुमति दिइएको छ। PIKM ले बंगलादेशको एक स्थानीय साझेदार – सेना कल्याण संस्था भनेर चिनिनेसँग मलेसियाको गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा उनीहरूलाई यहाँ काम गर्नको लागि सम्झौता गरेको थियो, रिपोर्टमा उल्लेख छ। बिहीबार क्वालालम्पुरस्थित बंगलादेश उच्चायोगमा मलेसियाका लागि बंगलादेशका राजदूत मोहम्मद गोलाम सरवारको साक्षीमा हस्ताक्षर समारोह आयोजना भएको यस विषयमा जानकारी भए...
काठमाडौं । स्वर्गका बारेमा जानकारी नभएका मानिसहरु सयदै हुनुपर्छ । स्वर्ग र नर्कका बारेमा हामी सबैले सुनेका छौँ । यो बीचमा आज हामी स्वर्गको धान लिएर आएका छौँ । पछिल्लो समय चीन विश्वभर विभिन्न रेकर्डहरू बनाउँदैछ ।अब चीन विश्वभर अन्तरिक्षमा धान उत्पादन गरेका कारण चर्चामा रहेको छ । अन्तरिक्षमा उब्जाउ भएको धानलाई ‘अन्तरिक्ष धान’ को नाम दिइएको छ । चीनले बीउको रूपमा पृथ्वीमा पहिलो पटक अन्तरिक्षमा फलेको धान लिएर आएको हो । तपाईंलाई जानकारी गराउ कि गत वर्ष नोभेम्बरमा, चीनले धानको बीज चन्द्रयानको साथ अन्तरिक्षमा पठाएको थियो । १५०० धानको दाना अन्तरिक्षयानको माध्यमबाट पृथ्वीमा ल्याइएको हो । त्यसको तौल ४० ग्राम रहेको छ । अन्तरिक्षबाट ल्याइएको धान दक्षिण चीन कृषि विश्वविद्यालय परिसरमा रोप्ने तयारी चीनको रहेको छ । जानकारी अनुसार ति धानका बीउहरू अन्तरिक्षमा ब्रह्माण्डको विकिरण र शून्य गुरुत्...